Toa ny tsy nisy olona intsony tany an-tokantrano. Rakotra ary feno olona ireo toeram-pialamboly samihafa nandritra ny faran’ny herinandron’ny Paska iny. Nanaporofo ny fihatsaran’ny fari-piainana ny fahafahan’ny malagasy niala voly toa ireny. Maro tamin’ny andron’ny …Tohiny
Lalan’ny fifidianana : Anio ny fandaniana
Toarian’ ny fakan-drivotra kelin’ ireo solombavambahoaka dia hiroso amin’ny asa mivaingana amin’izay izy ireo androany, satria dia kihon-dalana goavana eto amin’ny firenena no miandry azy ireo, dia ny lalàna izay hifehy ny fifidianana filoham-pirenena izany. …Tohiny
Araka ny toromariky ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery amin’ny hanohizana hatrany ny ezaka eo amin’ny asa fanamboaran-dalana dia fantatra amin’izao fotoana izao fa efa manomboka ny asa fanamboarana iny lalam-pirenena Rn44 iny, taorian’ny fahasimbana navelan’ny rivodoza …Tohiny
Hifanotofan’ireo firenena vahiny ny fiaraha-miasa amin’ny Faritra Analamanga. Vao tsy ela akory mantsy izay no nisian’ny fifanaraham-piaraha-miasa teo amin’ny Faritra Analamanga sy Vietnam, tonga indray ny firenena sinoa. Araka izany, tontosa ny alahady 1 avrily …Tohiny